Watchsmith yeApple Watch inogamuchira yakakura kuvandudza | Ndinobva mac
Toni Cortes | 08/04/2021 20:00 | dzakawanda
Apple haina kupihwa zvakanyanya kuti ipe yakawanda libertad kune vashandisi vako kuitira kuti vagone kugadzirisa kutaridzika kwemidziyo yavo. Zvakamutorera makore mazhinji kukotamisa ruoko rwake uye pakupedzisira kugona kuve nemaPhones edu ane akawanda anogadziridzwa ekumusoro masikirini epamba mune yakachena Android maitiro.
Asi pasina kupokana mudziyo une rusununguko rwakawanda rwekufamba kana zvasvika pakushandura chimiro chayo ndiyo Apple Watch. Watchsmith chikumbiro chekuenderera mberi nekushandisa mikana yeshanduko dzechinhu chinoonekwa chewatch screen. Ikozvino ichangobva kugamuchira zvimwe zvinonakidza kugadzirisa.
Murindi, chishandiso chevashandisi veApple Watch iyo inopa akawanda masarudzo ekugadzirisa zviso zvekutarisa. Iwe ikozvino uchangobva kugamuchira hombe kuvandudza iyo inosanganisira mitsva maficha.
Iko kunyorera kunotora mukana wekumisikidza mikana yeApple Watch skrini uye ine matambudziko akasiyana anogona kuwedzerwa kumeso ekurinda, kuwedzera customizations kupfuura izvo Apple inopa paWOSOS.
Shanduro 2.0 yekushandisa ikozvino inounza zvimwe zvakawanda sarudzo kune vashandisi vayo. Semuenzaniso, Watchsmith ikozvino inotora mukana uzere nezve maficha e WatchOS 7. Vashandisi vanozowanawo matsva ekuomesa masitayera ekuratidzira mafoto, 24-awa dial, dial kalendari, zuva nzira, uye zvimwe zvakawanda.
Mukati meapp, Watchsmith ikozvino ine zviyero zvekudzidzisa metric, mepu, kurova kwemoyo, macalorie, Outlook kalendari kuona, kukwirira girafu, uye humwe hunyanzvi hutsva. Iyo yekudzoreredza zvakare inounza yakawanda nguva yenguva fomati sarudzo, yenguva yenguva karukureta, uye chiratidzo chakagadzirwazve
Watchsmith inowanikwa se vakasununguka in the App Store, asi zvimwe zvinhu zvinoda kunyoreswa pamwedzi kwe1,99 Maeuro kana kunyoreswa kwegore kwe 21,99 MaEuro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » Watchsmith yeApple Watch inogamuchira yekuvandudza kukuru